जनरल इन्स्योरेन्सको आइपिओको 'प्रि अलोटमेन्ट'आज, बाँडफाँड कहिले ? – Investing Nepal
जनरल इन्स्योरेन्सको आइपिओको 'प्रि अलोटमेन्ट'आज, बाँडफाँड कहिले ?
By: Nepse Direct Oct 04, 2020
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको साधारण शेयर (आइपिओ) को ’प्रि अलोटमेन्ट’ आइतबार (आज ) गर्ने तयारी निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ ।विक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलले आइतवार प्रि–अलोटमेण्ट गरी मंगलवारसम्म बाँडफाँट गर्ने तयारी रहेको बताएको छ ।
उक्त कम्पनीले असोज ११ देखि १४ गतेसम्म रू. ३० करोड बराबरको ३० लाख कित्ता आईपीओ विक्री गरेको हो । कुल कित्तामध्ये सार्वजनिक निष्कासन मार्फत विक्री गरेको २७ लाख ३० हजार कित्ता शेयर विक्री प्रबन्धकले बाँडफाँट गर्ने तयारी गरेको हो ।कुल कित्तामध्ये उक्त कम्पनीले १ लाख २० हजार कम्पनीका कर्मचारी र १ लाख ५० हजार कित्ता सामूहिक लगानीकोषका लागि छुट्याएको छ ।
उक्त कम्पनीको आईपीमा मागभन्दा ८ गुणाबढी आवेदन परेको छ । विक्री प्रबन्धकका अनुसार ८ लाख १६ हजार ३६ जना आवेदकबाट २ करोड २६ लाख २१ हजार ७०० कित्ताका लागि आवेदन परेको हो ।
हालको धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँटमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक आवेदकलाई न्यूनतम १० कित्ताको दरमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसावमा कम्पनीको आईपीओ गोलप्रथाद्धारा बाँडफाँट हुनेछ । २ लाख ७३ हजार भाग्यशाली लगानीकर्ताहरुले मात्र १० कित्ताका दरले आईपीओ हात पार्ने छन् ।